Afrika - ezombusazwe -
Ngubani obangela ukuhunyushwa kweBhayibheli neKoran ezilimini zase-Afrika? E-Afrika, ezindlini zonke, ungaphuthelwa yikho konke ngaphandle kwebhayibheli lamaKristu namaKoran ... Funda kabanzi
Ukuntuleka kwemvelaphi yabaholi abaMnyama / nabaholi base-Afrika kuvimbela izwekazi ukuba liqale futhi libhekane nezinselelo zalo. Ukulingiswa kwesikhungo nokusebenza ... Funda kabanzi
Ukuthula kwakhe kukhathaza umuntu ongaphezu koyedwa: ngokusho kwemithombo ekhonjwe eduze kukamongameli waseDRC, owazise i-KL, i-First Lady Denise Nyakeru akezwa nakancane ... Funda kabanzi
Futhi leli gciwane leCorona lingahle libe yisiqunto sokunquma ukugcotshwa kukaMongameli Félix, kanye namaCongo jikelele. Izwe liqophe amacala angama-65 kuphela. Kanjani ... Funda kabanzi
Bazimisela abelungu kukho konke nakho konke. Lesi simo sengqondo sokujabha siyohlala nini? Selokhu kwavela iCovid-19, akukaze kube khona kokuqashelwa okuphawulwe abaholi bakaNoyi ... Funda kabanzi
"Impikiswano ivulekile! Ohulumeni be (amazwe ase-Afrika) abanendaba nabantu. Futhi cabanga ukuthi kungenxa yokubonga uNkulunkulu wabo ka-Israyeli wase-Afrika e-Afrika ukuthi izifo eziwumshayabhuqe ... Funda kabanzi